Midnimo: Furaha Halganka lagu soo celinayo gobolada maqan ee SSC. – Radio Daljir
Maarso 9, 2011 12:00 b 0
Puntland maxaa looga baahan yahay?
1. Inay hogaamiso halganka lagu soo celinayo gobolada SSC ee ka maqan maamulka Puntland.
2. Beelaha isugu yimid safka hore ee halganka dib u xoreynta ma geyaan in la kala furfuro, waxay ku socdaan magaca Puntland waxayna qabaan inay xaq tahay in shacabka SSC loo hiiliyo oo dulmiga laga qaado. Haddii Puntland ilaalin kari weydo himiladaas lagu midaysan yahay, waxaa waajib ku ah inay dib ugu celiso beelahaas safka hore ku jira deegaamadoodii inta aanay dhicin isku dhac dhexdooda ahi. Waxaan xasuustaa muddo laba bilood ka hor ku aadan oo beesha Nur Axmed shiraysay gudo iyo dibadba ayaa odayaasha gudaha mid ka mid ah la weydiiyey su’aal macnaheedu ahaa: Nur Axmed ahaan diyaar ma u tihiin halganka lagu soo celinayo dalka maqan? Waxa uu ku jawaabay: “Maanta Dhulbahante diyaar garow dhab ah noogama muuqdo, oo niman kursi laga qaaday iyo kuwo raba in dhaqaale dibadaha looga soo diro ayaa boolaxooftaynaya laakiin maalinta Dhulbahante ay dhab ka tahay in halgan dhab ah oo xalaal ah uu galo safka hore ayaanu kaga jiri doonaa”.
3. Maamulka Puntland waxaa looga baahan yahay inuu diyaariyo qorshe iyo siyaasad cad oo gobolada maqan lagu dhaqayo. Waa in golihii deegaanka la sheegaa waqtiga la samaynayo, waa in la sheegaa waxa laga yeelayo kooxda Somaliland ku jirta iyo kuwa ku jira hogaanka SSC. Si kooban waa in maamulka Puntland keenaa himilo ay dadka SSC gudo iyo dibadba, Somaliland iyo hogaankaba isugu soo dhawaan karaan. Waxaa halkaas ina dhigay waa khilaaf iyo shakhsiyaad naftooda u xamaalanaya, side uga bixi karaa? Puntland ayaa laga rabaa.
Waxgaradka iyo Bulshada SSC guud ahaan maxaa laga rabaa?
1. Waxaa laga rabaa in caqligoodu maanta shaqeeyo, hore waxay uga shaqeeysiiyeen caadifadda iyo cunaha. waynu ku jabnay.
2. Waxaa la idinka rabaa inaad wax doon yeelataan, lana timaadaan qofka wax doonaya waxa looga baahan yahay oo ah inuu caddeeyo marka hore waxa uu doonayo iyo qaabka uu ku heli karo. Marka uu helana qaabka uu himiladiisa hadhay ugu gaadhi lahaa. Maanta aynu ku midawno halganka aynu ku soo celinayno dalkeenii iyo dadkeenii. Ha inoogu lammaanaato inaynu talada goboladeena gacanta ku qabsano oo maamul gobol iyo degmo doorasho ku yimid u samayno sida gobolada kale ee Puntland.
3. Xurmeeya walaalada Puntland ee naftooda iyo maalkooda u huray inay idinla xaqiijiyaan inaynu xorriyadeena gaadhno. Qofka aan u mahadniqin Aadamiga uma mahadnaqo Allaha Weyn. Waa xaddiis nabigeenii Suubaana(SCW) inoo sheegay.
4. Ciidamo beeleed ayaa Laascaanood weeraray waa aynu beel beel isu dilo Dhulbahantow. Ka fogaada inaynu beelo beelo isu dilo. Ciidamo beeleed ma soo dhicin karo Laascaanood, kuwa Kalshaana ma gelin karo yididiilo. U daaya kuwa haysta haddii aydinaan himilo fog oo aynu ku wada badhaadho wada dooni Karin.
5. Halgankeenu waa dadkeena oo nabad, cadaalad iyo barwaaqo hela iyo goboladeena oo maamul dadku soo dhistay oo ay kula midoobaan Puntland kadibna Somaliweyn hela. Waa halgan raba in Dhallinyaradu helaan daryeel, duqayduna xaqdhawr iyo sabo ay rabbigood ku sugaan inta geeridu u imanayso. Maanta waxaa daashaday barakac, qabow, cudur iyo hurdoxumo, guryahoodiina kuma soo noqon karaan oo waxa ka taagan ayaa ka daran dhibka haysta.
6. Kala badbaadiya dhiig walaalo Soomaali ah oo ku midooba dantiina, oo sheega waxa aad doonaysaan, intaas keliya ayaa ku filane. Isaaq inagaa ehel u ah waana walaaladeen. Inagumay soo duulin, wanaag badana waan u rajaynayaa. Waxaa inagu soo duulay koox qawlaysato ah oo shilin shisheeye u beensheegay. Dadkiina waxay ku addoonsadeen baahida gudban ee jirta oo askarta iyo shacabkuba way afduuban yihiin, keliya Isaaq ma aha ee inaga xataa ayaa shilinkaas iyo awoodaas la soo dayntay u qafaalan.
Gebogebadii maamulka Puntland waa dawlad ee qaab dawladnimo ha u dhaqanto. Ma aha in Cabdisamad iyo kooxda SSC lagu daawado waxa ka socda safka hore ee difaaca, ee waa in si fog loo fekeraa oo wadajir loo wada shaqeeyaa. Haddii aydin diyaar ahayn, waxba kuma jabna ee inta aad diyaargaroobaysaan ciidamada kala qaada, dadkuna wuu u sii adkaysan karaa wixii dhib ah halka uu burbur abid ah ka dhaxli lahaa dagaalka maanta. Kala ilaaliya doorashada soo socota iyo qorshaha lagu soo celinayo gobolada inaga maqan.
Bilayska Puntland oo sheegay in ay qabteen nin la dhashay Atam, kana warbixiyay howl-galladii ammaan ee Gaalkacyo.